လိင်တူချစ်သူအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဂိမ်းကိုသင်လိင်တူချစ်သူဖြစ်နှင့်သင့်လိင်စိတ်အပေါငျးတို့သအရှည်နှင့်နက်နဲသောစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာပြီးပြည့်စုံသောညစ်ညမ်းဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အရာအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှနှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ကစားသမားမှလုံးဝအခမဲ့နှင့်တားမြစ်ခြင်းမရှိသောဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပူဇော်ရာ၌ဤကြံ့ကမ္ဘာကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပျော်စရာအချိန်များအတွက်လိုအပ်သမျှကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဒီဂိမ်းတွေကစားတဲ့အခါသင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါသင်ရထားတာထက်အများကြီးပိုပြင်းထန်သွားလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှသောအမာခံလိင်ဂိမ်းများအမည်ကိုအကြံပြုအဖြစ်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်လို့ပဲ။, ဒီအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကသင့်ဦးနှောက်ကိုသင်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံနေတယ်လို့ထင်စေမှာဖြစ်ပြီးဒါအစစ်အမှန်ကိုခံစားရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤဂိမ်းများ၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းမှုတွင်ဂိမ်းအသစ် ၅ ခုသာပါ ၀ င်သည်ဟူသောအချက်ကိုအားပေးသည်။ ဤရွေ့ကားဂိမ်းအသစ်တိုးတက်လာသောဂရပ်ဖစ်နှင့်အများကြီးပိုရှုပ်ထွေးဂိမ်းစတိုင်နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ သငျသညျဤဂိမ်းများတွင်လုပျနိုငျလုပ်ရပ်များအတွက်လွတ်လပ်ခွင့်တွေအများကြီးပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တဖန်သင်တို့လည်းအရေးယူဤမျှလောက်များစွာသောရှုထောင့်ကိုစိတ်ကြိုက်ရလိမ့်မယ်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ဦးလုပ်ကြံလိင်တူချစ်သူလိင်ဂိမ်းရောက်စေဖို့အနည်းငယ်ဆိုဒ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း,သင်အခမဲ့ကြောင့်ခံစားနိုင်. ဤဆိုဒ်ကိုအောင်ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားအင်္ဂါရပ်များအားလုံးသင့်ရဲ့ကွီးစိတ်ကူးယဉ်များအတွက်ညာဘက်ရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်။, သင်သည်မည်သည့်အခမဲ့လိင်ပြွန်ကျော်,ညစ်ညမ်းအဘို့ဤဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည့်အဘို့ဤမျှလောက်များစွာသောအကြောင်းပြချက်များရှိသည်။ တဖန်သင်တို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာအရာအားလုံးအန်းဒရွိုက်နှင့်အိုင်ဒီအက်စ်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အပြေးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အပေါ်ဿုံအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်လိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းဂိမ်းရဲ့အကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုအတွက်ပူဇော်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျော်မွေ့လာကြ။
ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုနှင့်အတူအဓိကပြဿနာသင်ရုံအဲဒီမှာထိုင်စောင့်ကြည့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေသောအကြောင်းအရာကိုသင်အရေးယူထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်မသာ,ဒါပေမယ့်သင်ရှိသည်ထိန်းချုပ်မှု၏အဆင့်သင်သည်သင်၏အကြီးမားဆုံးအိပ်မက်တွေကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုနည်းလမ်းများအတွက်စိတ်ကူးယဉ်ပြောင်းလဲစေပါလိမ့်မယ်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာကျနော်တို့သင်ချင်တယ်သို့သော်သင်လိင်ရှိသည်နိုင်သည့်အတွက်လိင်ဂိမ်းတွေနဲ့လာမယ့်နေကြသည်။ သူတို႔ကိုလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈလို႔ေခၚၾကၿပီးအင္တာနက္မွာေတြ႔ရတဲ့အေတြ႔အႀကံဳတခ်ိဳ႕နဲ႔ လာၾကပါတယ္။ သင်မည်သည့်ရာထူးအတွက်ဇာတ်ကောင်ကိုအပ်နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောရိုင်းမျိုးမှတဆင့်သူတို့ကိုထားနိုင်ပါတယ်။, တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဤလိင် ၀ တ်စုံများသည်သင့်အားဂိမ်းများ၏ဇာတ်ကောင်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။ စိတ်ကြိုက်မီနူးဒါရှုပ်ထွေးသောကွောငျ့သငျသညျသူတို့ကိုသင်ချင်မည်သူမဆိုတူအောင်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကာတွန်း၊ဟာသ၊ကာတွန်းနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဗီဒီယိုဂိမ်းများမှကျော်ကြားသောဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးကိုသင့်အားအခွင့်အလမ်းပေးမည့်ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများရှိသည်။
ပြီးတော့လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်၊ပြီးတော့ငါတို့ဆိုက်မှာရှိတဲ့လိင်ဂိမ်းနဲ့ယုတ်မာဖို့လိုတယ်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာမင်းဟာကြက်တစ်ကောင်ဖန်တီးပြီးတော့မင်းဟာနည်းလမ်းများစွာနဲ့အခြားကစားသမားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တယ်။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူချက်တင်စကားပြောနိုင်ပြီးငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဖန်တီးအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၌သူတို့ကိုအမှီပြု.
ငါတို့သည်သင်တို့ဘာမှမမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်ပေးဆောင်စရာမလိုဘဲအမာခံဂိမ်းကစားပျော်မွေ့စေရန်ဤပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ဒါဟာအခမဲ့လိင်ပြွန်၏တူညီသောဒဿနအပေါ်ပြေး,ကျွန်တော်တို့ကိုအခမဲ့အမှုအရာစောင့်ရှောက်ကူညီရန်အချို့ကြော်ငြာများနှင့်အတူသင်အချိန်မအတွက်ကစားချင်ဂိမ်းအမျိုးမျိုးရောက်ရှိစေရန်ဖြောင့်ရှေ့သို့လှန်လှောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ. ငါတို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့သောမှတ်ချက်အပိုင်းများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပျဉ်ပြားအဖြစ်ဆိုက်အပေါ်အချို့သောအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်။ အားလုံးအတွက်ကျနော်တို့ကဒီမှာရှိသည်သောဂိမ်းသင်သည်သင်၏လိင်တူချစ်သူဘက်မှာရှာဖွေစူးစမ်းဘို့စုံလင်သော၊အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်လိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်ပဲစပ်စုလျှင်။